Shackleton: isodhoma neGomora | Kwayedza
Shackleton: isodhoma neGomora
07 Aug, 2014 - 16:08	 2014-08-07T16:53:16+00:00 2014-08-07T16:53:16+00:00 0 Views
KOMBONI yeShackleton. - Mifananidzo: Kingstone Mapupu
KOMBONI yeShackleton. – Mifananidzo: Kingstone Mapupu
KURASA hunhu kunonzi kwagodza mukomboni yemugodhi usiri kushanda weShackleton, kuChinhoyi, sezvo nzvimbo iyi ichinzi yave Sodhoma neGomora chairo. Varume vanonzi vari kutiza mhuri dzavo kunzvimbo dzakaita seChinhoyi, Banket, Karoi kana Harare vachinogara nepfambi mukomboni iyi. Dzimba dzeko dzave kurojeswa kune vamwe vanhu kunze kweavo vaimboshandira mugodhi uyu.
Komboni ine chipfambi chatsviriridza iyi inowanikwa pamugodhi uri mumugwagwa unobva kuLion’s Den uchinosvika kumugodhi weAlaska.
Dare rashe wenzvimbo iyi, Mambo Nemakonde, rinonzi nguva nenguva rinogarirwa pasi nyaya dzevanhu vanotorerana madzimai kana varume.
Chikonzi mudare raShe Nemakonde, VaJohn Chiutare (45), vakatsinhira nyaya yechipfambi chanetsa mukomboni iyi.
“Vamwe havakwire kuno kudare kuzomhan’ara, vanongopedzerana ikoko asi vamwe ndivo vanouya tichivatonga. Dambudziko nderekuti mugodhi uyu wakavhara, saka vazhinji vaishandamo havasisina chekurarama nacho, madzimai evanhu chaiwo ave kuwanikwa achiita chipfambi. Vana vechidikiwo vabhebha,” vakadaro VaChiutare.
Vanoti Mambo Nemakonde, VaWilson Magonde, vanoziva nezvekurasika kwehunhu uku.
“Chipfambi ichi chinowanikwa mudzimba pamwe chete nemumabhawa – nzvimbo iyi yava Sodhoma neGomora chaiyo. Hapana chakanaka hatizive kuti sei vanhu vasingatye zvirwere,” vakadaro.
Vanoti vanombotonga nyaya dzemadzimai evanhu vaive vabatwa vaine zvikomba.
“Vanouya pano chipfambi chaitwa, isu dare redu harirambanise vanhu. Tinovati vadzokere vose kumba, kana murume achida kuripwa kunyange ari mukadzi ndizvozvo. Tinovaenzanisa pamurawu wechivanhu kuti dzimba dzirambe dzakamira,” vakadaro.
VaChiutare vanoti vamwe vanasikana havachaenda kuchikoro sezvo vabereki vasisina mari nekuda kwekuvharwa kwakaitwa mugodhi uyu.
Panzvimbo iyi pane mabhawa matatu anonzi panguva yehusiku panoungana vanasikana apo vanhurume vemukomboni nevatyairi vemarori vanenge vachirura. VaChiutare vanoti izvi ndizvo zvekare zviri kuitika kumimwe migodhi yakavharwa seAlaska neMhangura.
Mumwe mugari wemukomboni repaShackleton, VaWinter Thembo (32), avo vanoshanda pane chimwe chitoro, vanoti nhamo ndiyo iri kukonzera mamwe madzimai kuita gumbo mumba, gumbo kunze.
Vakati: “Vanhu vari muno vave kurarama nemaricho kuminda yakakomberedza. Mari yacho ishoma uye vamwe havadi kushanda basa rinorwadza nekudaro vanoguma vave kuita chipfambi.
“Vasikana vezera remakore 12 kana 15 vari kuita chipfambi muno, kana itwo twukomana tunokechawo kana twabva kumaricho nekuti nedhora unowana mukadzi musvinu pano.”
Vakati rimwe dambudziko riri panzvimbo iyi nderekuti hapana kamba yemapurisa izvo zvinoita kuti ny’any’a dziite madiro.
“Taiva nepolice post ikabviswa. Saka angova madirativhange pasina anotsiura,” vakadaro.
Komboni yepamugodhi uyu ine dzimba dzinodarika 500 dzine makamuri mana paimba uye dzimwe dzimba dzinonzi dzinogara mhuri nhatu kana kudarika sezvo dzave kurojeswa.
Mai Zebron Nhamo (35) vanoti dambudziko guru kushaikwa kwemabasa sezvo vanhu vasisina zvekurarama nazvo.
VaDaniel Mapindura (65), vekuMagororo kuHurungwe, vanotiwo:
“Chipfambi chatekeshera kwose-kwose, atova mashavi nekuti mamwe madzimai evanhu vave kuita chipfambi. Zvave kuda nyasha dzaMwari,” vakadaro.